Galaxy M30s ga - eji batrị mAh 6.000 ga - abịa Gam akporosis
Samsung's Galaxy M nso na-enwe ezigbo nnabata n'ahịa. Ya mere, akara Korea na-arụ ọrụ n'ụdị ọhụrụ, dịka Galaxy M30s, Nke anyị na-amalite inweta ozi ọma n'izu ndị a. Ihe nlere a kwesiri iru ahia n’oge na-adịghị anya ka anyị matara. Ihe ekpughere bụ na ọ ga-enwe nnukwu batrị.
Galaxy M30s ga - enwe batrị kachasị n'ime oke ekwentị Samsung. Companylọ ọrụ ahụ n'onwe ya bụ onye gosipụtarala batrị nke ụdị ọhụrụ a ga-enwe, nke a na-atụ anya na ọ ga-abata n'oge na-adịghị anya na ụlọ ahịa. N'ezie na India na mbu.
Batrị mAh 6.000 bụ ihe na-echere anyị na Galaxy M30s. Companylọ ọrụ ahụ agbatịwo akwụkwọ mmado nke ha kwuru banyere ikike batrị a, na mgbakwunye na igosi na ọ ga-abụ ihe nlere n'ime ezinụlọ a. Ekwenyeghi na nke a bụ ekwentị na-eji ya, mana ekwupụtala ya na ọtụtụ mgbasa ozi.
Ọ bụ na mgbakwunye na nke ihe nlere na batrị kachasị anyị hụrụ na Samsung. N'ihi ya, ọ na-anọchikwa anya mgbanwe dị mkpa maka onye nrụpụta Korea na nke a. Batrị buru ibu, nke ga-atụgharị gaa na nnwere onwe dị mma maka etiti etiti ọhụrụ a.
Ekwerela ekwentị a na mmasị, ọ gaghị ewe ogologo oge iru ahịa ahụ. Fọdụ mgbasa ozi kwuru na ekwesịrị ịmalite Galaxy M30 na August, dika anyi gwara gi. Agbanyeghị na amabeghị ma anyị ga-ezute ya ụbọchị ole na ole anyị nwere ọnwa Ọgọstụ a. O yighị ka ọ ga-eme.
Ka o sina dị, o yiri ka ọ fọrọ nke nta ka ọ kwadebe n'ahịa. Ya mere Samsung gara n'ihu na-emegharị etiti ya n'ụzọ dị otu a. Ihe niile na-egosi na Galaxy M30 a ga-abụ ezigbo nhọrọ n'etiti etiti a, nke ga-abụrịrị na ọ ga-apụta maka nnukwu batrị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » The Galaxy M30s ga-abata na nnukwu batrị
Meizu 16s Pro: Ọhụrụ dị elu nke akara ndị China